FANTATR’ANDRIAMANITRA NY FITENY REHETRA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 octobre 5, 2012 Laisser un commentaire sur FANTATR’ANDRIAMANITRA NY FITENY REHETRA
“Fa ilay mpamory hetra kosa…niteha-tratra ka nanao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota”. (Lioka 18:13)
Ao anatin’ilay sarimihetsika amin’ny fiteny Anglisy mitondra ny lohateny hoe: “My Fair Lady” dia sahirana mafy ilay mpilalao sarimihetsika Eliza Doolittle amin’ny fanononana ara-dalàna ny “a”. Nilaza taminy ny mpampianatra azy ny tokony hamerimberenany rima momba ny orana any Spania toy ny vavaka fanao eo ampandriana alohan’ny fatoriana.
Dia nampian’ilay mpampianatra azy hoe: “Ifankahazo tsara amin’ny Tompo ianao raha manonona tsara ny teny mba tsy handratra ny sofiny amin’ny fanononana diso”.
Fantantsika anefa fa tsy marina izany: “Fantatry ny Tompo ny fiteny rehetra na manao ahoana na manao ahoana fomba fanononana azy, ary na inona na inona ‘grammaire’ ifehezana azy. Ny fo no jeren’i Jesosy fa tsy ny teny mandrafitra ny vavaka ataontsika. Hitantsika izany ao amin’ny fanoharana nataon’i Jesosy momba ilay fariseo sy ilay mpamory hetra. Iry voalohany dia nankao amin’ny Tempoly ary nivavaka nampiasa fiteny mahitsy sy ara-dalàna raha ny fitenenana no resahina, saingy ny hevitry ny teny nolazainy kosa dia feno fanamarinan-tena. Ilay mpamory hetra kosa, etsy an-kilany dia nanao vavaka tsotra, saingy feno fibebahana. Ary nohenoin’Andriamanitra ny vavaka nataony.­­
Ampian’Andriamanitra isika rehefa mivavaka. Hoy i Paoly tamin’ireo Kristiana Romana: “Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina” (Romana 8:26).
Fantatsika izay tian’Andriamanitra ho hita rehefa mijery ny fontsika Izy. Mitady finoana izy noho ny asam-pamonjena izay nataon’i Jesosy Kristy zanany. Jesosy no fantsona mampitohy ny vavaka ataontsika ka mahatonga izany ho eken’Andriamanitra. Jesosy no mpampianatra antsika, izay nanome antsika ny vavaka nampianarin’ny Tompo. Nandritra ny fotoana nonenany teto an-tany, dia sady nisy vavaka lava nataony (jereo izay voasoratra ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona toko faha-17), no nisy koa vavaka fohy (ny vavaka nataony teo ambony hazofijaliana , izay fohy nefa mahitsy tsara).
Koa avelao Eliza hanitsy ny fiteniny, alohan’ny hatoriany, fa tsy mahasolo vavaka akory izany!
Publié parfilazantsaramada octobre 5, 2012 Publié dansUncategorized